विज्ञ सञ्चालकको विरोध किन ? | गृहपृष्ठ
Home पाठक विचार विज्ञ सञ्चालकको विरोध किन ?
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा विज्ञ सञ्चालक राख्नु नै नपर्ने तर्कसहितको सम्पादकीय गत शुक्रवारको आर्थिक अभियान दैनिकमा पढ्न पाइयो । तर, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा विज्ञ सञ्चालक राख्ने भनी ऐनमा नै उल्लेख भएको कुरालाई राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारीले जागीर खाने प्रपञ्चका रूपमा व्याख्या गरेको चाहिँ मन परेन । केही हदसम्म नेपाल राष्ट्र बैङ्कका त्यसबेलाका कर्मचारीहरूले भविष्यमा रोजगारी सुनिश्चित गर्ने हिसाबले पनि केही प्रावधान बनाए होलान् । तर, उनीहरूले जागीरकै लागि यस्तो नीतिगत व्यवस्था नै गरे भन्ने आधार भने छैन । किनभने विज्ञ सञ्चालक राख्ने विषय नेपालमा मात्रै भएको कुरा होइन । विश्वभरका बैङ्क वित्तीय संस्थालगायत अन्य कम्पनीमा विज्ञ सञ्चालक राख्ने परम्परा छ । कसैले यसको विरोध गरेका छन्, कसैले समर्थन । तर, विश्वव्यापी रूपमै यो व्यवस्थालाई स्वीकारिएको छ । त्यसैले निकै सङ्कुचित मनसायका साथ यो व्यवस्थालाई आलोचना गर्ने काम उचित होइन ।
अर्कातर्फनपढेका, कम पढेकाले बैङ्किङ व्यवसाय गर्नैहुँदैन भन्ने पनि होइन । त्यसो भनियो भने बैङ्किङ व्यवसाय केही निश्चित वर्गको मात्रै हुनुपर्छ भनेको हुनेछ । फेरि सबै प्रवर्द्धक सञ्चालक समितिमै हुने पनि होइनन् । त्यसैले एकजना विज्ञ सञ्चालक समितिमा हुने भएपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा समस्या आउँछ जस्तो पनि लाग्दैन । मुख्य कुरा नियतको हो । यदि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन नै कायम नगराउने नियत राख्ने हो भने पढेलेखेकैले पनि राम्रो नगर्न सक्छन् । राम्रो नियत राख्ने हो भने संस्थागत सुशासन कायम गराउन समस्या हुँदैन । संस्थागत सुशासन कायम गराउने कुरामा राष्ट्र बैङ्कको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । अहिले राष्ट्र बैङ्कले विशेषगरी जनशक्तिको अभावमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । यसो हुँदा खराब नियत राख्ने बैङ्क सञ्चालकहरूले अनुचित लाभ लिइरहेको अवस्था छ । यदि राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो अनुगमन तथा नियमनकारी भूमिकालाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाउने हो भने समस्याको गहिराइ कम हुने थियो ।
विज्ञ सञ्चालकले खराब नै गर्छन् भन्ने पनि हुँदैन । उनीहरूले धेरै राम्रो काम गरेका उदाहरण पनि प्रशस्त छन् । त्यसैले कुनै पनि विषयको सबै पक्षलाई केलाएर मात्रै त्यसको निष्कर्षमा पुग्नु राम्रो हुन्छ । शुक्रवारको सम्पादकीयमा पनि यही हुन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । एउटा पक्षलाई बढी केन्द्रित गरी अन्यलाई बेवास्ता गर्दा पूर्वाग्रही भएकोजस्तो देखियो । वस्तुनिष्ठ भएर समीक्षा गर्ने हो भने विज्ञ सञ्चालकको न त लाभ मात्रै छन्, न त हानि मात्रै । लाभहानि दुवैको समीक्षा हुनु आवश्यक छ ।
नेपाल राष्ट्रबैङ्कको एक पूर्वकर्मचारी
अग्रिम जानकारी चाहियो
सोमवारको आर्थिक अभियान दैनिकको ‘प्रडक्ट’ परिशिष्टमा प्रकाशित चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी (सीए)सम्बन्धी विस्तृत समाचार पढ्न पाउँदा साह्रै खुशी लाग्यो । मेरो पनि यही विषय पढ्ने सोच छ । तर, यो विषय अध्ययनका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रियालगायत विभिन्न विषयमा मलाई जानकारी थिएन । साथी वा कक्षा शिक्षकहरूलाई सोद्धा पनि चित्त बुझ्दो विस्तृत जानकारी पाएको थिइनँ । तर, यस दैनिकमा सोमवार प्रकाशित समाचार पढेपछि यस विषयमा मैले धेरै जानकारी पाएँ । केही समयअघि यस दैनिकमा प्रकाशित ‘टी-एसएलसी’सम्बन्धी विस्तृत समाचार पढ्ने मौका मिलेको थियो । त्यो समाचार पनि हामीजस्ता विद्यार्थीका लागि निकै उपलब्धिमूलक थियो । त्यसपछि सबै दिनका अङ्क पढ्न नसके पनि सोमवारको अङ्क नछुटाई पढ्ने गरेको छु । शिक्षाक्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक सबैलाई उपयोगी हुने जानकारी एकीकृत रूपमा दिएर यस पत्रिकाले निकै राम्रो काम गरेको छ । अर्को कुरा आगामी शिक्षा अङ्कमा छापिने विषयका बारेमा सोमवारकै शिक्षा परिशिष्टाङ्कमार्फत जानकारी दिए पाठकलाई अझ सहज हुने थियो । आगामी दिनमा पनि विद्यार्थीसम्बन्धी नयाँनयाँ विषयका बारेमा जानकारी दिने काम गर्दै गए हाम्रा लागि पनि यो दैनिक उपयोगी हुने थियो ।
प्रवीण पौडेल, अनामनगर, काठमाडौं ।
सेवा प्रदायकबीच प्रतिस्पर्धा
यस दैनिकको सोमवारको अङ्कमा एउटै पृष्ठमा छापिएका ‘एनसेलका ग्राहक ६० लाख’ र ‘टेलिकमको विशेष छूट’ शीर्षकका दुवै समाचार पढेँ । ग्राहकलाई आकर्षित गर्न यी दुवै दूरसञ्चार कम्पनीले समय-समयमा विभिन्न किसिमका योजना ल्याउने गरेका छन् । यस्तो योजना ल्याउने विषयमा नेपाल टेलिकम (एनटसी)भन्दा एनसेल निकै अगाडि पाएको छु । मैले एउटै मोबाइलमा राखेर दुवै कम्पनीका सीमकार्डमार्फत सेवा लिइरहेको छु । नढाँटीकन वास्तवमै भन्ने हो भने नेपाल टेलिकमभन्दा एनसेलको नेटवर्क राम्रो छ । भरपर्दो विश्वासिलो हुन र कुनै राम्रै पदमा रहेको व्यक्तिले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्नैका लागि पनि एनटीसीको मोबाइल प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता मैले पनि महसूस गरेको छु । आफ्नो सेवा प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या बढयो भन्दैमा नेटवर्किङ क्षमता विस्तार नगरीकन सिम मात्रै वितरण गर्ने एनटीसीको कारणले पनि उसको सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । जेहोस् सेवा प्रयोगको महशुल लिने कुरामा भने यी दुवै कम्पनी कोहीभन्दा केही कम छैनन् । ग्राहक झुक्याउन भने दुवै कम्पनी उस्तै छन् । तर, जेभए पनि दुवै कम्पनीको योजनाले हामी प्रयोगकर्तालाई भने फाइदा भएकै छ । दशैंतिहारमा मात्र होइन, अन्य समयमा पनि यस्तो छूट दिए सेवाग्राहीलाई फाइदा हुने थियो ।
विजय राई, ताहाचल काठमाडौं ।